Maitiro ekutsvaga mifananidzo paGoogle | ECommerce nhau
Maitiro ekutsvaga mifananidzo paGoogle
Kana tichida mufananidzo, chinhu chakajairika ndechekuti tinoenda kuGoogle, tsvaga izwi kana chirevo chatinoda uye topa Mifananidzo kutora imwe. Nhasi, ziva sei kuita google mifananidzo Chinhu icho munhu wose anoziva. Asi izvo zvingave zvisingazivikanwe ndeaya madiki manomano, pamwe nemutemo, kushandiswa, mhando nezvimwe. zveizvi.
Nekuti, unoziva here kuti kutora chero mufananidzo kubva kuGoogle kunogona kuve zvisiri pamutemo? Uye zvino vanogona kukukumbira mari yakawanda yekushandiswa kwechifananidzo pasina kodzero? Kune eCommerce, izvi zvakakosha, ndosaka isu tichamira kuti titsanangure zvese zvaunoda kuziva nezvekutsvaga mifananidzo paGoogle.
1 Maitiro ekutsvaga mifananidzo paGoogle
2 Sei usingakwanise kudhawunirodha mifananidzo kubva kuGoogle
3 Izvo zvinonzi zvishandiso zvekutsvaga
3.1 Ndeapi marezinesi eCreative Commons
4 Ndoziva sei kana ndichigona kushandisa Google foto
Sewongororo, kunyangwe izvi tichiziva hazvisi kuzove chinhu chitsva, ngatijekese kuti tingatsvaga sei mifananidzo paGoogle.
Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa vhura Google browser, pakombiyuta, piritsi kana nharembozha. Zvadaro mune injini yekutsvaga tinoisa izwi kana mazwi anomiririra mufananidzo watinoda. Somuenzaniso "shati". Migumisiro ichabuda ichave yakasiyana, asi kunyanya isu tine ma link. Uye isu tinoda mifananidzo.
Kana uchiziva, kumusoro, izwi rekuti "mifananidzo" richaonekwa uye, kana tikadzvanya, mibairo yatichapihwa nebrowser inotove yakavakirwa pane zvatinoda, kureva, zvinoonekwa nemifananidzo.
Zvino, chaunofanirwa kuita kudzvanya pamufananidzo wodzvanya bhatani riri kurudyi uye chengetedza mufananidzo. Asi, chiito ichi chinoita sechisina mhosva, neimwe nzira chinogona kukuisa munjodzi.
Sei usingakwanise kudhawunirodha mifananidzo kubva kuGoogle
Muzhinji, mifananidzo yese inoonekwa paGoogle ine copyrighted. Ndiko kuti, kune copyrights. Izvi zvinoreva kuti kana ukashandisa mufananidzo iwoyo asi usati waubhadharira, munhu akaugadzira anogona kukumhan'arira okumbira muripo wex mari yekushandiswa kwawakaita.
Uye izvozvo zvine migumisiro yakaipa.
Dambudziko nderekuti, Ukatarisa pikicha kubva kuGoogle, kazhinji hainyatso kukuudza kana ine copyright kana yemahara. Uye kunyangwe kuzvitaura, pane dzimwe nguva paanenge asiri iye uye anokupa sarudzo izvo, gare gare, iwe unofanirwa kudzima nekuti wakave nedambudziko nazvo.
Kushanda sei ipapo?
Izvo zvinonzi zvishandiso zvekutsvaga
Unoziva here kuti mafoni ekutsvaga chii? Zvinogoneka kuti kwete, asi chokwadi ndechekuti, paunoenda kumifananidzo, mune imwecheteyo menyu, pamagumo ezvese, iyo izwi rekuti "Search tools".
Chinhu chakakosha, kunyanya kana uchitsvaga mifananidzo paGoogle. Sei? Zvakanaka, nekuti inokupa sarudzo dzakasiyana. Zvakananga:
Saizi. Iyo inokutendera iwe kusefa iyo mifananidzo nehukuru, yakakura, yepakati, icon, yakakura kupfuura kana kupa saizi chaiyo.
Ruvara. Kana iwe uchida kutarisa pane zvakatevedzana zvemifananidzo ine rumwe ruvara.
Mutsa. Kana iwe uchida clipart, maGIF, mitsara yekudhirowa.
Musi. Kuzvisefa nechero zuva kana zuva chairo (maawa makumi maviri nemana, vhiki, mwedzi ...).
Kodzero dzekushandisa. Ichi chikamu chakakosha, uye ndechekuti inokutendera kusefa mafoto neCreative Commons marezinesi uye marezinesi ekutengesa uye mamwe marezinesi.
Ndeapi marezinesi eCreative Commons
Creative Commons marezinesi chishandiso icho inokutendera kuti ushandise mifananidzo kana mabasa akadzivirirwa nekodzero pasina kukumbira mvumo kubva kumunhu akaagadzira. Mune mamwe mazwi, nerezinesi iri unobvumidza iwe pachako uye / kana kushandiswa kwekutengesa kwemufananidzo.
Zvino, iwe unofanirwa kungwarira nekuti kune akasiyana marezinesi eCreative Commons anogona kumisa kushandiswa kana kwete kwemufananidzo.
Kuzivikanwa. Pakurishandisa unofanira kubvuma kuva munyori.
Kuzivikanwa kusiri kwekutengesa. Paunenge usingakwanise kuishandisa kutengeserana.
Hapana basa rinobva. Irezinesi raunogona kushandisa foto padanho rekutengesa uye remunhu. Asi haugone kuigadzirisa asi inofanirwa kugara sezvairi.
Uye rudzii rwemifananidzo iyo Google inotipa neCreative Commons? Chinhu chakajairwa ndechekuti inotipa yekutanga, iyo yekuzivikanwa, ichitibvumira kuishandisa zvese pachedu uye padanho rekutengesa. Dambudziko nderekuti dzimwe nguva bhurawuza pachayo nemhedzisiro yayo inoparara. Ndiko kuti, uri kushandisa foto uye ine copyright chaizvo. Kana izvozvo zvikaitika irombo rakaipa, asi unofanira kuzvigadzirira.
Ndoziva sei kana ndichigona kushandisa Google foto
Iwe unotoziva kutsvaga kwemifananidzo paGoogle, iwe unoziva kuisefa zvichibva pane zvaunoda kuzadzisa, uye wawana mufananidzo unoenda zvakakwana. Asi ndinogona kudhawunirodha nekuishandisa? Ndipo panopinda kupokana.
Kana iwe uchida kuve zviri pamutemo sezvinobvira, tinokuudza kuti usamboshandisa Google kutsvaga mifananidzo, nekuti yakawanda yacho haigone kushandiswa mahara, asi ivo vanofanirwa kuvabhadharira rezinesi.
Nekudaro, pane hunyengeri hudiki hunogona kuuya hunobatsira. Uye ndizvo ziva kuti mufananidzo uyu unobvepi. Uye kune mabhangi emifananidzo asingabhadharwi, akadai sePixabay, Pexels, Unsplash ... iyo, patinotsvaga mufananidzo, inogona kuonekwa mumigumisiro. Kana iwe ukaona kuti url yechero mufananidzo waunoda ndeyemahara emifananidzo mapeji ebhangi, saka hauzove nedambudziko. Uye unoziva sei? Kupinda mufananidzo.
Panzvimbo yekuti Google iratidze nekuidhawunirodha kubva ipapo, zviri nani kuvhura url ine iyo foto uye ona izvo peji iro rine, kana iri yemahara mufananidzo bhangi, kana iri yakabhadharwa, kana iri blog, nezvimwe. Ndiyo nzira yakachengeteka yekutarisa kana uchigona kuishandisa kana kwete. Ko kana ndisina chandinowana? Kurudziro yedu ndeyekuti usashandise kudzivirira matambudziko.
Rimwe dambudziko raunogona kuwana mumifananidzo yeGoogle imhando. Chaizvoizvo, iyi haisi iyo yakanakisa munyika, izvo zvinoreva kuti kana iwe ukavashandisa kune eCommerce kana basa rehunyanzvi, inopa mufananidzo wakashata. Zvakare tinokurudzira kubheja pamabhangi emifananidzo, mahara kana kubhadharwa, izvo zvinobatsira kuvandudza kutaridzika kwewebhu. Ramba uchifunga kuti ndiyo yekutanga fungidziro yaunogadzira pamushandisi, uye kana iyi isiri yakanaka, iwe uchave nematambudziko ekutengesa kwaari.
Iye zvino zvawave kuziva maitiro eGoogle mifananidzo, ungaishandisa kune bhizinesi kana kuenzanisira mabloggi ako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Zvidzidzo uye zviwanikwa » Maitiro ekutsvaga mifananidzo paGoogle
Chii chinonzi CPM